» विपतमा वाइडबडीलाई भ्याइनभ्याइ, राष्ट्रसेवामा ध्वजाबाहक !
विपतमा वाइडबडीलाई भ्याइनभ्याइ, राष्ट्रसेवामा ध्वजाबाहक !
२०७८ जेष्ठ १, शनिबार १९:३३
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले आज चीनको राजधानी बेइजिङ र ओमानको राजधानी मस्कटबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउँदैछ ।
यस्तै बेइजिङबाट चीन सरकारले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डरसहितका स्वास्थ्य सामग्री लिन निगमको वाइड बडी जहाज आज राति ११:०० बजे बेइजिङ्ग उडान भर्न लागेको हो ।
निगमको पूर्वनिर्धारित उडान तालिकाअनुसार वाइड बडी जहाज ‘ए’ ३३० उडान नं आरए ४२५१ जहाज खाली अक्सिजन सिलिन्डर लिन राति बेइजिङ उड्दैछ । मे १५, १६, १७ र १८ तारिखमा बेइजिङबाट दैनिक ५५० सिलिन्डर ल्याइनेछ । काठमाडौँ–बेइजिङ उडान ५:४५ घण्टाको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।